Sawirro:Shiicada Ciraaq oo Laga Qabsaday Magaalooyin Hor Leh.
Monday July 14, 2014 - 16:15:11 in Wararka by Super Admin
Ciidamada Mujaahidiinta dowladda islaamiga ah ayaa dagaal kula wareegay laba magaalo oo katirsan wadanka Ciraaq.
Wararka ka imaanaya wadanka Ciraaq ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiinta ay saacadihii lasoo dhaafay lawareegeen dhul baaxad leh oo wadankaasi katirsan kadib dagaallo ay lagaleen cadawga.
Kadib dagaal muddo saacada ah socday ayay ciidamada mujaahidiinta dowladda islaamiga ah si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta magaalada aldaluuciyah oo katirsan wilaayada salaaxudiin ee inteeda badan cadawga laga xureeyay.
Cutubyo katirsan ciidamada mujaahidiinta ayaa ciidamada shiicada ah kula dagaalamay waddooyinka magaalada lagasoo galo ee dhanka samaara iyagoona ka qabsaday saldhigga booliska xarunta degmada iyo maxkamadda daaguutka ee magaaladaasi oo dhammaantood hadda gacanta mujaahidiinta soo galay.
magaalada aldaluuciyah waxay dhacdaa duleedka samaara waana magaalada istiraatiiji ah mas’uuliyiin u hadlay dowladda islaamiga ah waxay sheegeen in 8 gaadiidka gaashaaman ee hamarka loo yaqaan iyo saanado hub ah ku qaniimeysteen dagaalka daluuciyah islamarkaana ay dileen tobaneeyo cadawga katirsan.
Dhinaca kale ciidamada mujaahidiintu waxay qabsadeen degmada Tawakul oo katirsan gobolka Diyaala bartamaha dalka Ciraaqbarta Twitterka wilaayada dayaal aya lagu sheegay in mujaahidiintu furteen degmada oo dadka degan ay ahaayeen shiico waxayna mujaahidiintu cagta mariyeen waxyaabo shirciyaad ah oo ay shiicadu caabudaysay.
Sawirro lagusoo bandhigay baraha bulshadu ku kulanto waxay muujinayeen ciidamada mujaahidiinta oo iyagoo gaadiidka dagaalka wata gudaha usii gelaya magaalada iyo iyagoo cadawga kula dagaalamaya bartamaha magaaladaasi.